wordpress - Free Premium Responsive WordPress Theme Downloads ah
HomeProducts tagged "wordpress"
Gaajo oo bilaash ah WordPress
Mawduuca Dhibaatada WordPress
Gaajo free Theme WordPress Theme - Maqaayad Muhiim ah WordPress Theme
Noocyo badan oo WordPress ah si loo abuuro website-ka ku saabsan cuntada, makhaayadda ama huteelka ayaa la heli karaa maalmahaas, laakiin badankoodu waxay ka maqan yihiin waxyaabo xiiso leh sida hawlaha lacag-bixinta ama fursadaha ballansiga lagu dhisay. Laakiin, "Foodner" waa mowduuc ku habboon oo ku siin doona bogga si buuxda jawaabta leh naqshad indhoole ah oo ku xiran qaababka casriga ah. Waxaa jira baaxo leh fursado si fudud loo maamuli karo oo isku dhafan oo lagu daro fududeynta macaamiishaada mustaqbalka. Si aad u siiso taabasho shakhsiyeed, waxaad ku heli kartaa iyada la habeeyo wakhti kasta. Kormeerku waa mid aad u fiican oo naqshadana waa la nadiifiyaa oo dhan.
Horumarinta xirfadleyda waxay soo bandhigeen "Dhagxaanta" WordPress mawduucyada maskaxda ku hay in qof waliba waa inuu xusuusiyaa dhacdada muusikada ee ay ka soo qaybgaleen. Tani waa mawduuca ugu dambeeyay ee WordPress oo aad ku dhisi karto website-kaaga oo ah naadiga habeenkii ama goobaha kale ee madadaalada, halkaas oo sawirada la soo dhajin karo. Waa mawduuc lagu soo koobay sifooyin cajiib ah oo xitaa shakhsiyaadka loogu talagalay si ay u daboolaan baahiyo gaar ah oo khaas ah. Intaa waxaa dheer, mawduucan ayaa sidoo kale cajiib ah oo loogu talagalay dhisida website-ka la xidhiidha xayeesiinta, muusigga ama qorshaynta filimka. Boodhadhka warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa in lagu daro waxqabadyo dheeraad ah website-kaaga oo aad u hesho dhagaystayaal badan.